iOS 11.2 yekupedzisira vhezheni yave kuwanikwa kune wese munhu | IPhone nhau
Maawa mashoma apfuura, vakomana vanobva kuCupertino vakaburitsa beta rechitanhatu reIOS 11.2, asi zvisinga tsanangurike uye pasina pfungwa, Apple ichangobva kuburitsa vhezheni yekupedzisira yechipiri chikuru iOS kugadzirisa, nhamba 11.2, chiitiko chinounza kwatiri Apple Pay Cast seyakanyanya kutsva, sezvatinoona mumanotsi ekuvandudza.
Dzimwe dzese dzenyaya dzeichi chikuru chechipiri kukanganisa bug iyo iyo Calculator inotiratidza paunenge uchiita kuverenga nekukasira, dzimwe nguva uchisiya mabhatani nekuda kwekuratidzira, uye mapikicha matsva ehupenyu hwemhando itsva dze iPhone.
Chimwe chinhu chitsva icho chechipiri chikuru chekuvandudzwa chinounza kwatiri chinowanikwa mukuchaja zvisina waya, izvo Iyo zvino inowirirana ne 7,5w machaja pane iPhone 8, iPhone 8 Plus, uye iPhone X. Mapepanhau matsva emadziro akawedzerwawo kune ese maPhones, mamwe emoji akagadziridzwa, uye sarudzo nyowani dzave kuwedzerwa kunyorera maapplication.
Nezve Apple Pay Cash, ini handina kuwana mukana wekuyedza mashandiro ayo ndisati ndatsikisa nhau, asi mukufungidzira kuvhurwa kwayo kwaive kwakaganhurirwa kuUnited States, asi zvinoita sekupedzisira kuratidzwa kwayo kuchaita saizvozvo munyika dzese umo maApple Pay aripo, nekuti mune zvinyorwa zvekuvandudza zvinoratidza kuwanikwa kwayo.
Zvezvipi parizvino izvo zvatisina kana trace ndeye iyo kuwiriranisa mameseji neICloud, chimwe chezvinhu zvitsva zvakaunzwa naApple kuWWDC yegore rino, asi izvo zvandisati ndaona kusvika parizvino, kunyangwe zviratidzo zvehupenyu, saka zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti tichafanirwa kumirira zvigadziriso zvemunguva yemberi kuti tikwanise kunakidzwa neiyi mukana.
Hatizive kuti chii chingave chakaitika zvekuti Apple yakaburitsa vhezheni yekupedzisira yeIOS 11.2 maawa mushure mekutanga beta yekupedzisira, asi sei Munguva pfupi yapfuura zvinhu zvisinganzwisisike zvinoitika muCupertino, hatifanire kuzoshamisika nemhando idzi dzekufamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11.2 yekupedzisira vhezheni yave kuwanikwa kune wese munhu
Wifi yakatemwa kusvika mangwana uye kuidzima kubva kunzvimbo yekudzora !!!!
Chii ichi chitsva chisina maturo / basa ????
Unondishandurira ini here?
Kana ndikadzima WIFI neBluetooth zvinondiudza "wifi yakabviswa kusvika mangwana" ...
Ini ndakagadzirisa uye ini handizvione chero kupi. Uye iwe unoziva kana zvichidikanwa kuve unoshanda Apple Pay kuitira kuti ushandise Apple Bhadhara mari? Kana zvichaita here kuishandisa kunyangwe isu tisina kiredhiti kadhi inoenderana neApple Pay? Ndatenda!
Ini ndinofunga kuti kunyangwe ichiti Apple Bhadhara Cash, inongowanikwa muUnited States; Chokwadi, sezvo ivo vaifanirwa kuburitsa iyi yekuvandudza vasingatarisiri, iyo yekutsanangudza tsananguro haizove yakagadziriswa kune dzakasiyana nyika
Ini ndakagadziridza makumi mashanu apfuura uye iyo skrini haina chinhu neapuro uye inobva ipapo. Zvave sezvizvi kwemaminitsi makumi mana uye hazvisi kufambira mberi ... ndoitei izvozvi?
Ini ndadzorerazve ne vol- uye simba bhatani uye zvinoshanda!
Andrés de Angelis akadaro
Yangu iPhone 8 Plus haiite yakaoma reset kubva nezuro kuti ini ndinoigadziridza, zvinoitika zvakafanana kune mumwe munhu? Ndatenda
Pindura kuna Andrés de Angelis
Ndine iPhone SE uye iOS11.2 uye kubvira Svondo 3/12 inondisungirira uye inotsvaga password nguva dzese !! Zvandinogona kuita?